Blog – CUBE
အတွင်းပိုင်းပုံစံသည်အိမ်များကိုယခင်ခေတ်များထက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးဆွဲဆောင်မှု ရှိစေသည်။ ထိုအတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်းနယ်ပယ် တွင် ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကြောင့် လက်တွေ့ကျသော ဒီဇိုင်းများနှင့် လှပသောနေရာများမြင်တွေ့လာနိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ စီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် အကူအညီများလိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသင့်သော ၀န်ဆောင်မှု အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ Restoration and home décor retailers အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းသည် အလှဆင်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များအတွက် ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များ လိုအပ်သည်။ ပန်းချီကားများ၊ နောက်ခံပုံများ၊ ပန်းများနှင့်အခြားဖက်ရှင်ကျသည့်အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ရန်တစ်စုံတစ် ဦးကို လိုအပ်လိမ့်မည်။ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးအလှဆင်ပစ္စည်းများကိုရရှိရန်အတွက် လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့် ယုံကြည်မှုရရှိထားရန် လိုအပ်သည်။ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အနေဖြင့် အထွေထွေဆောက်လုပ်ရေး၊… Read More »5 services you should use for your interior design business
Consider Color Palette First အခြားအရာများကို အစီအစဉ် မချမီ အသုံးပြုလိုသော လိုချင်သောအရောင်များကိုသေချာစွာ ရွေးချယ်ထားဖို့ လိုအပ်သည်။ဒီဇိုင်းတွင် ထည့်သွင်းလိုသောအရာများကိုသေချာစွာ နားလည်ခြင်းသည် မလိုအပ်သောအရာ များ၀ယ်ယူမှုများအတွက်ငွေဖြုန်းတီးခြင်းမရှိဘဲ ပုံမှန်အတိုင်းအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များသည် လူတစ်ယောက်၏ စိတ်ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်း စစ်ဆေး၍ အိမ်ရှိအခန်းတစ်ခုစီအတွက် လိုအပ်သော အရောင်များကို ရွေးချယ်နိုင်သောအစီအစဉ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်သင့်သည်။ ခေတ်မှီသောအရောင်အသွေးအများစုတွင် အရောင် ၂မျိုး ၃မျိုးရောစပ်ထားပြီး ထိုနေရာအား တတ်ကြွလန်းဆန်းမှုများ ခံစားရစေနိုင်သည်။ Create Focal Points အရောင်များအားရွေးချယ်ပြီးသည့်နောက်တွင် အဓိက နေရာများအားအခြေခံ၍ အခန်းများအားစတင်… Read More »JULIE MOTT REVIEWS THE BEST UNIQUE INTERIOR DESIGN ELEMENTS FROM IKEA TO MAKE YOUR HOUSE A HOME
2020 သည်အရာရာအားလုံးအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးသောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး မိမိတို့၏အိမ်များတွင်သာနေထိုင်ရသောနှစ်လည်းဖြစ်သည်။ ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် မိမိတို့၏ အိမ်တွင် စာကြည့်ခန်းများ၊ အိမ်တွင်းရုံးခန်းများ၊ အားကစားလုပ်သည့် နေရာများကို သိသိသာသာပြောင်းလဲရန် ဖန်တီးနေကြသည်။ သင်အိမ်အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့သည်ဖြစ်စေ၊ သင့်လက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးကိုပြန်လည်မွမ်းမံခြင်း၊ သို့မဟုတ် အနာဂတ်အတွက် DIY စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်းဖြစ်စေ၊ ပြန်လည်ရောင်းချမည့် တန်ဖိုးအား လက်ရှိထက်ဖြစ်နိုင် သမျှ မြှင့်တင်ပြီး လှပတင့်တယ်မှုရှိသောတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည်။ Modern Farmhouse Lulu နှင့် Georgia ရှိ Creative and Content မန်နေဂျာ Kelley Mason… Read More »Here Are The Interior Design Trends Going Away In 2021
ESCO Awarded by Zoom as Asia Partner of The Year 2020
နှစ်ပတ်လည်ပါတနာအစည်းအ‌‌‌ေ၀းပွဲ တွင် Zoom မှ Asia Partner of the Year အဖြစ်ချီးမြှင့်ခံရခြင်းအပြင် ESCO သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များအတွက်ပေးအပ်သော Pinnacle ဆုအတွက်နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့သည် Zoomကိုကြီးမားစွာထောက်ခံအားပေးသူများဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်း၏တန်ဖိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အတော်များများအတွက်လွန်စွာသိသာပြီးဖြစ်သည်။ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း အဝေးမှအလုပ်လုပ်ခြင်းစွမ်းရည်သည်အလွန်အရေးကြီးလာပြီး Zoom အခမဲ့ဗားရှင်းကိုလူတို့သိရှိလာသည်နှင့် အမျှ Zoom သည် ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်။ သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် Zoom ၏အခမဲ့ဗားရှင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်းကုမ္ပဏီများ (အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင့်)မှသာ Featured မျိုးစုံပါ၀င်၍ ပေးချေနိုင်သောအစီအစဉ်များကိုပေးနိုင် ကြောင်းရှင်းလင်းစွာသိလာရသည်။ ငွေပေးဆောင်ရသော Zoom လိုင်စင်အတွက် ၀ယ်လိုအားတိုးလာသည်နှင့် အမျှ ပြသာနာများလည်း… Read More »ESCO Awarded by Zoom as Asia Partner of The Year 2020
အိန္ဒိယဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍသည် ယခုနှစ်အတွင်းအဓိကတိုးတက်မှုအချို့ကိုကြုံတွေ့ရမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ 1. 4G recharge price hike Airtel, Jio နှင့် Viအားသွင်းစနစ်များသည်ယခုနှစ်တွင်မြင့်တက်လာနိုင်သည်။လေ့လာသုံးသပ် သူများက ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများသည်သူတို့၏အခွန်နှုန်းထားကို ၁၅ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြှင့်တင်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။Vodafone Idea (Vi) သည် Jio နှင့် Airtel မတိုင်မီ ၎င်း၏ ငွေဖြည့်အစီအစဉ်၏စျေးနှုန်းကိုတိုးမြှင့်သည့်ပထမဆုံးဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ဟုသတင်းများက ဆိုသည်။ဤသည်မှာသုံးနှစ်အတွင်း ဆက်သွယ်ရေးများမှဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကောက်ခံခြင်းဖြစ် သည်။၂၀၁၉ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများဖြစ်သော Jio၊ Airtel နှင့် Vi တို့သည်၎င်းတို့၏ကြိုတင်ငွေဖြည့်အစီအစဉ်များကိုနိုင်ငံအတွင်း ၂၅ မှ… Read More »5 ways telecom industry will change in India in 2021
Costco သည် ပမာဏ ကြီးမားသောပစ္စည်းများအတွက် အထူးလျှော့စျေးများပြုလုပ်ပေး ခြင်းကြောင့်လူသိ များသော်လည်း ဤလက်လီအရောင်းဆိုင်တွင် အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများစွာရှိသည် ကို အများစုမှာ မသိကြပေ။ Organize your garage with Costco’s wire shelving rack. Harrison-McAllister ၏အဆိုအရ ကားဂိုထောင်တစ်ခုသို့မဟုတ် ကြီးမားသောနေရာ တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းရာတွင် Costco မှ ဤဝါယာကြိုးစင်ကဲ့သို့ ဘီးပါသောစင်များရှိပါက ကြီးမားသော ခြားနားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ This blue and white floral lamp will make a… Read More »An interior designer shares9of the best home-decor items to get at Costco
-မဟာဗျူဟာငါးနှစ်သဘောတူညီချက်သည်နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံရှိ Ooredoo၏လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများမှလူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။ -Ericsson 5G ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အဖြေများသည် Ooredoo အားပိုမိုမြန်ဆန်သောစျေးကွက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအသစ်များကိုစတင်ရန်ကူညီသည်။ Ooredoo အုပ်စုနှင့် Ericsson (NASDAQ: ERIC) တို့သည် 5G ရေဒီယို၊ အဓိကနှင့်သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးထုတ်ကုန်များ၊ ဖြေရှင်းမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်ပေါင်းစည်း ၀န်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ Ooredoo အုပ်စုနှင့် Ericsson (NASDAQ: ERIC) တို့သည် 5G ရေဒီယို၊ အဓိကနှင့်သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးထုတ်ကုန်များ၊ ဖြေရှင်းမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်ပေါင်းစည်း ၀န်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ Qatar, Indonesia, Algeria,… Read More »Ooredoo Group and Ericsson sign five-year strategic 5G agreement
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် အိမ်တွင်အချိန်များစွာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရသည်။နှစ်သစ်သို့ ကူးပြောင်းသွား သောအခါတွင်လည်း အိမ်တွင်အမြဲနေထိုင်ခြင်းသည် အနဲငယ်ရှည်ကြာလိမ့်ဦးမည်မှာ ဧကန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်နေထိုင်ရာနေရာကို ပြောင်းလဲရန်စဉ်းစားရမည့်အချိန်ကောင်း ဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်းအလှဆင်ဒီဇိုင်းများရေပန်းစားခြင်းသည် အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသော်လည်း COVID-19 ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါသည် အလုပ်လုပ်သောနေရာတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အပြင်ဘက် တွင် ဆူညံမှုများရှိ သော်လည်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုဖန်တီးပေးခြင်း ဟူသောအဓိကအကြောင်းအရာ နှစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့အား အာရုံစိုက်စေသည်။ Go Blue or Go Home ရိုးရှင်းသောအပြာရောင်အားယခုနှစ် 2020 ၏ Pantone အရောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး အတွင်း ပိုင်းအလှ… Read More »2021’s Hottest Design Trends According to Experts
The Top Home Decor Trends In 2020, According To Interior Designers
ယခုနှစ်အစ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအစတွင်လူတိုင်းသည် ၂၀၂၀ အတွက်ကြီးမားသောအစီအစဉ် များရှိကြသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခု၊ သွားချင်နေသည့်ခရီးတစ်ခု၊ စိတ်ကူးထဲမှ မျှော်လင့်ထားသောမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီး အခြေခံအားဖြင့် ၎င်းအစီအစဉ်များ သည်တစ်နှစ်တာအချိန်များအားအိမ်တွင် ကုန်ဆုံးဖို့မပါ၀င်ခဲ့ပေ။သို့သော်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အကျပ် အတည်းနှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘဲ အိမ်တွင်သာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရသည်။ ထိုအရာများရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်လူများစွာသည် ၎င်းတို့၏နေထိုင်ရာနေရာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် အခြေအနေဆိုးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခဲ့သည်။ လူများကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာတွေကိုပိုပြီးသတိပြု မိလာကြသည်။ ဒေသခံအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအဖွဲ့ Tanaw Studio ၏အဆိုအရ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွင် မလိုအပ်သည်များကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် အလှဆင်ခြင်းစသောလက်တွေ့ကျသော လုပ်ငန်း၂ခုကို အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်လာရကြောင်း သိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဖောက်သည်အများစု သည်သိုလှောင်ရာနေရာများအားပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်ပိုမိုသန့်ရှင်း သပ်ရပ်သော၊ငြိမ်းချမ်းသောနေရာတစ်ခုလိုချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။လူအများစုကသူတို့အခန်းများအား… Read More »The Top Home Decor Trends In 2020, According To Interior Designers
5G Success Demands Integration, Says QCT(Quanta Cloud Technology) President
ဆက်သွယ်မှုအတွက်ဝယ်လိုအားနှင့်ရောင်းချသူများ၊ ၀န်ဆောင်မှုပေးသူများ နှင့်ကွန်ယက် hardware များ အကြားဆက်ဆံရေးသည်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲသွားသောကြောင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နစ်သည် 5G အတွက် တွန်းလှန်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ QCT ဥက္ကဌ Mike Yang သည် ရှေ့တန်း ပြောင်းလဲမှု အနေနှင့် QCT ၏ 5G ဖြေရှင်းချက် များစုစည်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကျယ်ပြန့်သောသုတေသနမှတစ်ဆင့် 5G နှင့် AI သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ QCT သည် 5G စျေးကွက်လိုအပ်ချက်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲမှု၊ ဆက်သွယ်မှု အပလီကေးရှင်းများများလိုအပ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် ထားရှိရန် အခြေခံ အဆောက်အအုံနည်းပါးခြင်းတို့အတွက်လမ်းခင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။… Read More »5G Success Demands Integration, Says QCT(Quanta Cloud Technology) President